'मलाई यौनकार्यसँग निकै डर लाग्छ। किन होला ?'
केही समयपछि मेरो विवाह हुँदै छ। यौन कार्य सोचेर निकै डर लाग्छ। मलाई किन यस्तो भएको होला ? : जिज्ञासा : एम, काठमाडौँ
यौन सम्पर्क शारीरिकजस्तो देखिए पनि यसमा मानसिक पक्षको पनि उत्तिकै भूमिका छ। यौनका मामिलामा हाम्रो समाज खुला छैन। त्यसो भएर सामाजिक दृष्टिले अस्वीकार्य तथा सानै उमेरमा यौन दुव्र्यवहारमा परिएको छ भने कालान्तरमा यौनप्रति डर उत्पन्न हुन बेर लाग्दैन।
यौन सम्पर्कपछि कतिपय व्यक्तिले नरमाइलो वा उदासी महसुस गर्छन्। त्यसैले चरम सन्तुष्टिपछि कतिपय व्यक्तिको मस्तिष्कमा सेरोटोनिन नामक रासायानिक पदार्थ हर्मोनको कमी भई उदासीपन निम्त्याउँछ। किनकि, सेरोटोनिनले सन्तुष्टि वा खुशीको भाव जगाउँछ।
विवाहित दम्पतीमा यौनसम्बन्धी डर, चिन्ता हटेन भने दाम्पत्य जीवनमै नकारात्मक असर पर्न सक्छ। मानिसको आफ्नो प्रकृतिअनुसार यौनसम्बन्धी चिन्ता, डर पनि फरक–फरक हुन सक्छ। उमेरसुहाँउदो यौन शिक्षा, सुरक्षित सेक्स, यौन आनन्दका वैकल्पिक तरिका, आकस्मिक गर्भ निरोध, अनिच्छित गर्भबारे पर्याप्त जानकारी नहुनाले तथा असुरक्षित यौन सम्बन्धका कारण चिन्तित हुनु स्वाभाविक नै हो। त्यसो भनेर चिन्ता गर्दैमा समस्या आपैmँ समाधान हुने होइन। समयमै उचित पहल नगरेको खण्डमा गम्भीर खालको मनोरोग निम्तिन बेर लाग्दैन।
कलिलो उमेरमा यौन दुव्र्यवहार वा यौन हिंसाबाट पीडितबाहेक आपूmले मन नपराएको व्यक्तिसँगको विवाह वा वैवाहिक बलात्कारको घटनाले पनि यौनप्रति वितृष्णा जाग्ने वा डर उत्पन्न हुने हुन्छ। यस्तो डर सामीप्य हुनेदेखि लिएर चुम्बन गर्ने, नग्न बस्ने, यौन स्पर्श गर्ने, यौन सम्पर्क राख्ने कार्यसँग सम्बन्धित हुन सक्छ। यो कुरा पुरुषको हकमा पनि लागू हुन सक्छ। आफ्नो इच्छाबाहेकको व्यक्तिको नजिकै बस्नुपर्ला भन्ने चिन्तादेखि ऊसँग यौनसम्बन्धित गतिविधि गर्नुपर्ला भन्ने चिन्ताबाट सदैव पीडित हुन्छ।
निरन्तर रूपमा यस्तो प्रतिकूल वातावरण झेल्नुपर्दा मानसिक समस्या देखिन सक्छ। गोपनीय तथा एकान्त वातावरणको अभाव, यौन साथीबीच आत्मीयताको कमी एवं यौन कार्यका लागि प्रतिकूल वातावरणले यौन सम्बन्ध स्थापित गर्न अल्पकालीन रूपमा चिन्तित तुल्याउने हुन्छ। यस्तो यौन चिन्तामा व्यक्ति विशेषको अन्तर्निहित समस्या, अन्धविश्वास तथा शारीरिक स्थितिले पनि थपथाप गरेको हुन्छ।
कोही–कोही मानिस कहिलेकाहीँ अनावश्यक रूपमा त्यत्तिकै चिन्ता पालेर बसेका हुन्छन्। कुनै मापन विशेष नभए पनि आफ्नो यौनांग सानो वा ठूलो, बांगो, योनिमार्ग सुक्खा वा बढ्ता रसिलो, योनि निकै कसिलो वा खुकुलो, कुमारीत्व बाँकी छ छैन, विवाहेतर वा विवाहपूर्वको यौन सम्बन्धको निशानी छ छैन भनेर चिन्तित हुन्छन्। यस्तै खाले चिन्ता शीघ्र स्खलन, हस्तमैथुन, उत्तेजनामा नआउने विषयलाई लिएर पनि हुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा यौन कार्य सफल हुँदैन।
स्कुले जीवनमै उचित यौन शिक्षा, किशोर–किशोरीलाई प्रजनन शिक्षाका साथै विवाहपूर्व तयारी एवं विवाहपश्चात्को सम्बन्धबारे उचित परामर्श दिनुपर्छ। यौन हिंसा वा यौन दुव्र्यवहारबाट पीडितको हकमा उचित मनोपरामर्श गर्नुपर्छ। यौन चिन्ता पालेर बस्नुभन्दा यौन समस्याको प्रकृतिलाई विचार गरी त्यसको सामना गर्ने, उचित समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। यौनप्रतिको भयबाट टाढा भाग्ने होइन कि भयको प्रकृति हेरी चरणबद्ध (ग्रेडेड) रूपमा डर, त्रास हटाउने, यसको सामना गर्ने विधि अपनाउनुपर्छ। सुरुमा लिंग–योनि सम्पर्कभन्दा पनि प्रेमिल आत्मीय व्यवहार, यौन भलाकुसारी, आलिंगनलगायत यौन आनन्दका वैकल्पिक उपाय अपनाएर यौन कार्यप्रति सकारात्मक हुन सकिन्छ।
मद्यपानले रमाइलो गर्न वा तनाव कम गर्न मद्दत गर्छ। हल्का मद्यपानले संकोच हटाउनुका साथै सम्बन्ध विकास गर्न सहयोग गर्छ। नौलो जोडी वा नवदम्पतीबीच डर हटाई यौनसम्बन्ध कायम गर्न सघाउ पुर्‍याउने हुनाले मद्यपानले यौन क्षमता वा यौन चाहना बढाउँछ भनिन्छ। मद्यपान र यौनको विषयमा धेरैजसोले सकारात्मक असर पुर्‍याउँछ भन्ने धारणा भए पनि अधिक मात्रामा मद्यपान सेवन गर्नाले यौन क्षमतामा नकारात्मक असर पुग्न सक्छ।
मद्यपानले खासमा यौन क्षमता बढ्ने होइन। आफ्नो यौन क्षमताप्रति विश्वास नभएका तथा आफ्नो यौन चाहना प्रष्टसँग भन्न नसक्ने व्यक्तिमा मद्यपान सेवनपछि सकारात्मक प्रभाव परेको भान हुन्छ। तर, यो भ्रम मात्र हो। महिलाको दाँजोमा पुरुषले मद्यपानको प्रभाव राम्रो हुने भनिए पनि वास्तविकता त्यसो नभई यो मद्यपानको प्रभावबारे विश्वास मात्र हो। मद्यपानसँगै यौन सम्बन्धबारे सोचिरहेका व्यक्तिले सकारात्मक परिणामको श्रेय मद्यपानलाई दिने गरेको देखिन्छ।
२६ भदौ २०७६
उमेर पुगेर पनि महिनावारी किन हुँदैन ?
१९ भदौ २०७६
पुरुषको लिंग कत्रो हुनु सामान्य हो ?